त्रियुगा बगरमा शव, बेलदोभानमा कंकाल फेला (भिडियोसहित) | Purnapusti Khabar
त्रियुगा बगरमा शव, बेलदोभानमा कंकाल फेला (भिडियोसहित)
पूर्णपुष्टि/उदयपुर, असोज १२ गते ।
उदयपुरको त्रियुगा नगरपालिका वडा नं. ३ त्रियुगा नदिको बगरमा एक व्यक्तिको शब फेला परेको छ । स्थानीय त्रिनपा ९ गैरुनका ४० वर्षिय महमद वकिलको शब फेला परेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय उदयपुरका प्रमुख एसपी चन्द्रदेव राईले बताउनुभयो । स ८ प ३७३५ नम्बरको पल्सर मोटरसाईकलसहित उनको शब फेला परेको हो । मोटरसाईकल स्टेण्ट लगाएर राखिएको र शब घोप्टो अवस्थामा फेला परेको प्रहरीले जनाएको छ ।
बालुवा चाल्न गएका मजदुरहरुले सुक्रबार विहान बगरमा लास देखेर प्रहरीलाई खबर गरेका थिए । एकान्त बगरमा शब फेला पर्नुले उनको हत्या भएको स्थानीयको आशंका गरिएको छ । प्रहरीले उक्त घटना गएराती घटेको हुनसक्ने जनाएको छ । वकिल सुमो गाडी चलाएर सामान्य जिविकोपार्जन चलाईरहेका व्यक्ति हुन् । वकिलको शबलाई पोष्टमार्टमका लागि जिल्ला अस्पताल उदयपुर लगिएको छ ।
त्यसैगरी त्रियुगा नगरपालिका वडा नं. १६ बेल्दोभानमा एक पुरुषको कंकाल फेला परेको छ । बेल्दोभान नजिकैको झाँडीमा पुरानो अवस्थाको कंकाल फेला परेको हो ।
खटिएको प्रहरी टोलीले शरीरको मासु एउटै नरहेको, दुर्गन्ध केही नरहेको, कंकालमात्र रहेको, लगाएको लुगाफाटो मक्किसकेको, एउटा झोला र फाल्टो भेष्ट, पाईन्ट, मोवाईलसेट पनि मक्किसकेको अवस्थामा फेला पारेको छ ।
टाउकाको खप्पर, हात, खुट्टा लगायत शरीरका विभिन्न भागको हड्डीको कंकाल मात्र रहेको र जुत्ताभित्र नै खुट्टाको हड्डी रहेको अवस्थामा फेला परेको थियो । कंकाल कस्को र कहिलेको भन्ने थाहा नभएपनि निकै पुरानो भएको हुनसक्ने प्रहरीको अनुमान छ ।
मृतकको कंकाल जम्मा गरेर प्रहरीले जिल्ला अस्पतालमा लगेको प्रहरीले जनाएको छ । घाँस काट्न जाने स्थानीयले कंकाल देखेपछि प्रहरीलाई खबर गरेको थियो ।
दुबै घटनाको बारेमा अनुसन्धान भईरहेको उदयपुरका प्रहरी प्रमुख एसपी चन्द्रदेव राईले बताउनुभयो ।